Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Oktobra, 2014
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Oktobra, 2014
Tsy Nampitony Ireo Haisiana ny Fahafatesan'i “Baby Doc”
Karaiba 28 Oktobra 2014
Tsy nizaka ny heloka vitany fahavelona avokoa ireo mpanao didijadona Jean-Claude sy Francois Duvalier; mbola tandroka mamely ny Haitiana maro ihany ny tsy nampiharana ny rariny (fitsarana).
Azia Atsinanana 21 Oktobra 2014
Karaiba 18 Oktobra 2014
Nandray lesona marobe tokoa ity tonian-dahatsoratsika ity, izay teraka tany Karaiba ary mipetraka any Trinidad, raha nikarakara ny zaridainany. Mizara voa valo nitsimoka tanatin'ny feon'ny fieritreretana maha-olom-pirenenana azy izy eto.
Instagram, Toerana Hiadiana: Jamaikàna Artista Mpanao Reggae Mifanandrina Amin'ny Minisitry ny Zavakanto Sy Ny Kolontsaina
Karaiba 17 Oktobra 2014
Ohatra iray mampiseho ny fomba fanovàn'ireo mediam-bahoaka ny fomba hifandraisan'ireo mpanao politika ao Karaiba amin'ny vahoaka ireo zavatra vao haingana nataon'ireo mpiasam-panjakana ireo.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 14 Oktobra 2014
Nanazava ilay manampahaizana momba ny media sady mpikambana mpamorona ny sehatry ny bilaogy Rosiana, Anton Nossik, ny antony ieritreretany fa efa antomotra ny farany ho an'ireo vohikala nampiasain'ny olona an-davitrisany manerana ny tany